Raiisal wasaarihii hore ee Soomaliya oo dib ugu laabanaya Garoowe. – Banaadir Times
Musalsalka Maria&Mustafa Qeybtii.5aad
Al-Shabaab oo sheegatay in ay dagaal ku qabsatay Deegaanka Bacaadweyn ee Gobolka Mudug.
Raiisal wasaarihii hore ee Soomaliya oo dib ugu laabanaya Garoowe.
By banaadir 7th March 2020 18
Madaxweynihii hore ee Maamulka Puntland Cabdiwalli Maxamed Cali Gaas, sidoo kalena soo noqday Ra’iisul Wasaarihii Dowladii KMG ahayd ee uu Madaxweynaha ka ahaa Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta ku wajahan Magaalada Garoowe ee xarunta Dowlad Goboleedka Puntland.
Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyo xubno ay isku xisbi yihiin ayaa maanta tagaya Magaalada Garoowe, waxaana ay ka safrayaan Magaalada Istanbul ee dalka Turkiga oo muddooyinkii dambe shirar ugu socdeen Xisbiyada mucaadka ku ah DFS.
Gaas waxa uu Garoowe ka tagay kolkii looga gooleystay Doorashada Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland bilawga sanadkii tagay 2019-kii, wixii xiligaas ka dambeeyay cagihiisa ma dhigin deegaanada Maamulkaas.
Ujeedka safarka uu ku tagayo Cabdiwali Gobolka Nugaal waxaa lagu sheegay in uu ka qaybgalayo shirka uu iclaamiyay Madaxweyne Deni ee ay ka qaybgalayaan Saamileyda siyaasadeed ee Puntland.
Shirkaan ayaa dhacaya 15-ka bishaan oo ku beegan todobaadka soo socda sida ay Mustaqbal u xaqiijiyeen mas’uuliyiin katirsan Dowlad Goboleedka Puntland.
Sidoo kale, Gaas waxa uu socdaalkiisa uga faaiideysanayaa khilaafka ka dhex jira DFS iyo Dowlad Goboleedka Puntland, maadaama uu xubin ka yahay Xisbiyada Mucaaradsan Xukuumadda Soomaaliya.
Gaas waxa uu xubin ka yahay Madasha Xisbiyada Qaranka, waxaana uu dhawaan ka qaybgalay shir ay kaga hadlayeen Xaaladda Siyaasadeed ee Soomaaliya iyo abaabulka Doorashada dalka ee 2020/2021.
California oo xaalad deg deg ah la geliyey iyo dad corono ugeeriyooday.
Madaxweynaha Jubaland oo wadahadal ugu baaqay Madaxda DFS.
Musharax Madaxweyne Daahir Maxamuud Geelle oo saaka ku soo wajahan Muqdisho
By banaadir 20th November 2020
Dekedda Muqdisho oo Bilowday Muddo kadib in xiliyada habeenkii ah ay shaqeyso (Sawirro)